Laser kucheka achine kusanganiswa kwenhamba kudzora system
Nyore nyanzvi yekushandisa interface
Yakakwira-kumagumo yakangwara uye yehunyanzvi system yeiyo yakakwira-yakakwira simba fiber laser yekucheka zvinodiwa.Stable uye yakavimbika, nyore kuendesa, nyore kugadzirisa, kugadzirwa kwakachengeteka, kwakapfuma mabasa, kugona kuita uye humwe hunhu, Iko parizvino musika wakanyanya epamberi wakazvipira laser Kucheka maitiro.
Easier kugadzirwa manejimendi
Kugadzira uye kudhirowa kwakaparadzaniswa kuverengera kugadzikana kwekugadziriswa kwemidziyo yekugadzirisa, uye kutsigira kure network network kusunda uye manejimendi ekugadzirisa mabasa; Ipa imwe-kiyi calibration, laser alignment, kamwene kutsiva, yekuchenesa kamwene uye mamwe otomatiki maitiro eanokurumidza uye akachengeteka ekuchengetedza michina; Ziva yakachengeteka uye inoshanduka dhizaini kubereka kuburikidza nekuona AIDS;
Tarisa uye urekodi mamiriro emidziyo uye ruzivo.pa zviyero bvunzo otomatiki maitiro ekurerutsa kure uye nekukurumidza kugadzirisa matambudziko;
Optimize capacitance inotevera modhi kuti uwane yakachengeteka kuwana kune ndiro kugadzirisa uye inotevera rack;
Unganidza iro rekushandisa data remidziyo yezvinhu, uye zvine hungwaru kuyeuchidza vatengi kuchengetedza michina zvine musoro kuti vawedzere hupenyu hwebasa;
Analzye hukama huripo pakati pekugadzira machira uye track isingabatsiri munguva chaiyo, gadzirisa mutongo wekusimudza musoro wekusacheka musoro. Kuvandudza mashandiro ekugadzirisa uye kuona kuchengetedzwa kwekucheka musoro.
Nekukurumidza kwako kudzoka pane kudyara
Iyo nzira chaiyo ndeye 0.005mm, kurongeka kwekumira kuri 0.001mm, uye reeat yekumisikidza kurongeka ndeye 0.002mm Maximuim, kumhanyisa 5G, yekumhanyisa yekumhanyisa kumhanya 150m / min, yekumhanyisa kumhanyisa kumhanya 300m / min
General akateedzana modhi
Nemazvo jira simbi yekucheka nekugadziriswa kweiyo mikuru modhi, inochengetedza hunhu hweakakwira-simba anorema muchina maturusi. Tarisa pane chaiyo yepamusoro-yekumhanyisa kucheka; Yakashongedzerwa nehunyanzvi isiri-ferrous simbi (mhangura.aluminum. Isina simbi, molybdenum) kucheka nyanzvi data , yakajairwa ne fiber laser (simba ≤6000W), kuti ikubatsire kukohwa nekukurumidza uye zvakanyanya ...
1.Give iwe girini yekushandisa nharaunda (yakazara yakavharirwa chimiro)
2.Extremely yakakwirira yekucheka kugadzikana
5.Repeat kumisa kunyatsoita switch switch: ± 0.05mm
6.XY axis ine mechanical positioning, kuchengetedza nguva yekuwana rutivi
7.X akabatana inokosha aviation aruminiyamu ikafa Kudzingwa achiumba
8.00THE X-axis ndege chaiyo inoonekwa neyakagadzika ini marble flat plate≤0.03mm
Pashure: Crusher nyundo
Zvadaro: akacheka mazino
Cnc Fiber Laser Kucheka Muchina
Metal Laser Kutema Muchina
Yakaderera Laser Simbi Kutema Muchina
Simbi Laser Kutema Muchina